Sri Lanka ngonyaka udlala inezinhlobo inqwaba izivakashi ezivela emhlabeni wonke. Elinye lamadolobha athandwa kakhulu Negombo itholakala ogwini olusentshonalanga ye siqhingi. Lo muzi ikhule ukusukela wokudoba. Izifundo Negombo uzigcinile kuze kube yilolu suku. Kuphela manje iyisikhungo ezinkulu ukudoba. Umkhawulo wama-engxenyeni eseningizimu yaleli umatasa ukudoba zinsika. Le ndawo zithandwa yizivakashi. Umuzi ine a inhlanzi nemakethe ekulu, vakashela izivakashi ezweni lowo baze batuse ngisho nje sizijabulise.
Ihhotela endaweni izivakashi Negombo
Uma engxenyeni eseningizimu iDolobha libe anawo abadobi, le obheke enyakatho elula amabhishi kuqhathaniswa ehlanzekile sandy, ngesikhathi kanye okuyinto kwakhiwa endaweni izivakashi. emgwaqweni Its main - kuba Lyuis Pleys futhi Porutota Road, okuyinto ukusebenzisa parallel olwandle. Ngokuvumelana nalokhu ezitaladini futhi omakhelwane kuyinto omningi walo amahhotela, izitolo izivakashi, amathilomu, izindawo zokudla, amakilabhu. Lapha, kwi Porutota Road, kanti ihhotela IPharadesi Holiday Village 3 *.
Negombo ngenxa yokuthi isondele kakhulu izindiza oya esikhumulweni sezindiza ezisibangela izivakashi. Ihhotela kuyinto km 15 nje kude Bandaranaike Airport. Sikhishwe yokuthi umgwaqo sidlula edolobheni, yonke indlela kuzothatha cishe isigamu sehora.
Ibhishi futhi ulwandle
Kwezinye sites izivakashi zibonisa ukuthi ihhotela itholakala amamitha angaba ngu-100 ukusuka olwandle. Lokhu kungenziwa kubhekwe kweqiniso, uma thina, balinganise amabanga kumephu emgceni locondzile. Nokho, akubona bonke amaholide bakholelwa ukuthi ogwini kule ndawo zahlala ukuhlala ukhululekile. Jwayelekile sandy strip ububanzi 80-100 m uqala at 350-400 amamitha eningizimu, futhi aphelela esicishe sibe ikhilomitha. Kuyinto ebhishi ngobukhulu e Negombo. Ngo iseva kusukela isiqondiso ehhotela ungathola eziningana amabhishi encane anesihlabathi.
Ngakho, ukusho ukuthi Ihhotela ePharadesi Holiday Village 3 * isendaweni umugqa 1st, kungaba elula enkulu kakhulu.
Njengoba Bathi, ungalindi sezulu kolwandle. Futhi olwandle nakakhulu. Yiqiniso, zikhona izikhathi lapho ulwandle ihlukile ezolile enviable kanye nasemanzini. Kodwa ngezinye izikhathi ekuphumeni namagagasi zakhukhula konke lokho ukufinyelela. Ngakho-ke, ngokuya Sri Lanka, kungcono ucele kusengaphambili ngesimo selitulu saseBhetlehema ngaleso sikhathi sonyaka.
Amagumbi kanye Izinsiza
Ihhotela ePharadesi Holiday Village 3 * (Sri Lanka, Negombo) kuyinto eyinkimbinkimbi bathinteka izakhiwo eziningana esalisekela futhi ezimbili storey.
Indawo kuhlanganisa 49 amakamelo, phakathi lapho:
12 sesethi lamakamelo (De luxe);
4 izinombolo standard;
12 amafulethi ezimbili ekamelweni 5;
4 amakamelo-superior (suite).
Ngaphezu kwalokho, kukhona indawo isitayela amakamelo nomnyango ehlukile, ikhishi, kuvulandi, yokugezela, angasetshenziswa i ukuhlala enwetshiwe.
Zonke amafulethi anemisila air conditioning, ama-TV, minibars. Esikhathini yokugezela, siyohlale bamanzi ashisayo nabandayo.
Le ndawo ihhotela
Cottages lizungezwe kuyinto egcekeni nokunokuthula ngokuzinikela utshani manicured futhi zokuhamba tile. Zibonisa ichibi ongaphandle kanye ithala ilanga loungers uphumule. Amathawula for the loungers zingafundwa ehhotela. Ezinganeni kukhona ichibi sezingane ehlukile futhi ebaleni lokudlala.
Amasevisi siqu izivakashi ingakwazi ilondolo nokuthunyelwa kwezingubo elondolo, ephephile, ibhayisikili futhi ukuqasha imoto. Iphinde usebenza futhi exchange.
Ngezinye Ihhotela ePharadesi Holiday Village 3 * yokudlela futhi ibha. Zitholakala njengoba ehhotela izivakashi nezihambi. Ibhulakufesi ngokwesiko ihlelwe ngendlela a lezitsha. Ngokuvamile ahlinzekwa izitsha eziningana kusuka amaqanda, namasoseji noma ubhekeni, pasta, izinhlobo eziningana imifino nezithelo, okusanhlamvu, namakhekhe. Kulokhu, yokudlela ngokwayo idume izinhlanzi kanye kwasolwandle, nenyama izitsha ukudla okuhlukahlukene European nase-Asia.
Kwaselwandle - ukudla ajwayelekile futhi bendabuko kuleso siqhingi, wageza ngu ocean nxazonke. Nokho, unikezwa iqiniso lokuthi Sri Lanka ufika yizivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba, imenyu yokudlela inikeza eziningi ijwayelekile baseYurophu izitsha. Zikuyise sokudla aphethwe simiso A la Carte, okusho ukukhetha semenyu futhi inkonzo isikhonzi. Eyokuqala ngokuvamile ahlinzekwa izinhlobo eziningana puree isobho, kwesibili - ezimbalwa inyama kanye nenhlanzi izitsha nge tinhlobonhlobo side dish dessert ethulwa nezithelo ice cream. Ukudla uzilungiselele ngempela ezihlukahlukene, futhi phakathi nezinsuku ezimbalwa, imenyu ingase ingaphindwa. Ingxenye amatafula elise ngaphandle, kungakhathaliseki ukuthi izulu lihle ezolile ikakhulukazi like izivakashi.
neziphuzo ezibandayo, cocktail, Ungadla ngokwesiko eyayenziwa ibha.
Yini ukuzijabulisa inikeza ePharadesi Holiday Village 3 * izivakashi yayo?
Ihhotela ikakhulu ligxile iholide ethule eziphumulele, ngakho ezinomsindo ukuzijabulisa izithombe ayikho lapha. Ngaphakathi ehhotela ongawabhuka izinkambo Ukuqashwa kwemoto.
Izitolo eduze ngokushesha ehhotela okungaka. mass yabo eyinhloko itholakala emigwaqweni oyinhloko endaweni izivakashi kanye enkabeni yedolobha.
Njengoba kushiwo ngaphambili, yogu, okuyinto okuphambene ihhotela ngokuqondile, ngezinye izikhathi embozwe izimila hhayi kakhulu ezikhangayo izivakashi ezivela umbono we Classic lolwandle iholide. Bese kuthi-ke abanikazi ehhotela wathola le ndawo embalwa nje, kodwa hhayi ngaphansi kuka efunwa ngabakwa isicelo. Okusanda lapha ubambe amaqembu yangasese, imishado kanye kweminye imisebenzi yangaphandle.
Ukuthenga futhi ezikhangayo
izitolo ezincane nezimpahla izivakashi kanye izitolo ezidayisa izinto eziyizikhumbuzo ku Negombo yavama. Nokho, uma unentshisekelo endaweni yezitolo umnyuziki kungcono ukuya Colombo. Leli dolobha km kusuka resort 40 kuphela futhi kubhekwa inhlokodolobha elizibekela izwe eliyisiqhingi.
Sekuyisikhathi eside Sam resort edolobheni ayephuze amaKatolika, ngakho lapha yakhiwe eziningi amasonto obuKatolika, amasonto nezindawo zokukhulekela. Kuwufanele ngokuvakashela eNational Museum of Negombo ukuthola umqondo jikelele umlando kanye namasiko yalesi siqhingi. Okunye ezikhangayo ezakhiwe waphawula Dutch Hamilton Canal, Negombo Fort, a ethempelini lamaBuddha.
Sri Lanka idume ingcebo yawo engokwemvelo. Eduze edolobheni kukhona Nature Reserve esiyingqayizivele Muthurajawela. abathandi Wildlife ukulinda lapha ezingaphezu kuka-200 zezilwane nezitshalo ezingavamile.
Abahambahamba emigwaqweni Negombo, ungakwazi kungazelelwe abe e-Amsterdam noma Venice. Ngomqondo ongokomfanekiso, yebo. Iqiniso liwukuthi e sebuningini iziteshi, okuyinto waqala ukwakha ezinsukwini zika sebukholoni.
Umsele omude kunayo yonke Hamilton elingamamitha angamakhulu ambalwa nje ePharadesi Holiday Village 3 * (Sri Lanka).
Negombo Budebuduze oya esikhumulweni sezindiza zamazwe usenzé saba izivakashi real base edolobheni. Othile uchitha lapha lonke iholide, futhi kwabanye, leli dolobha iba iphuzu yezokuthutha. Ngakho-ke, amahhotela ozama ukuba arsenal zabo ezihlukahlukene ikamelo izinhlobo, ukuze izivakashi ngaphezulu. Lokhu kungabonakala kuyi-ezihlukahlukene nePharadesi Holiday Village 3 * isibalo amakamelo. Izibuyekezo ngalokhu ehhotela lithuthukile kakhulu kule minyaka yamuva. Izivakashi uthi yokuhlala enhle, amakamelo ahlanzekile futhi ukhululekile, service enhle.
Njengoba emahhotela amaningi, isheke-in isikhathi 12:00 pm. Uma ufika ngaphambili kanye ehhotela unesikhala kungaba axazulule zisuka, kodwa ngesikhathi esifanayo bafuna eliqinisekisiwe.
isigaba ihhotela zayo kuyavumelana. Yiqiniso, uma thina uliqhathanisa nabazalwane emahhotela aphambili e-Turkey noma aseGibithe, ukukhubazeka kungatholakala. Kodwa labo abamagama okulindele ukufanisa akhethiwe "Inkanyezi", ukuphumula ziyaneliswa.
"Supradin" amavithamini. Izibuyekezo nezici